Arimaha Bulshada Archives - Page 3 of 31 - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > Page 3
August 5, 2019 admin605
Waxaa maanta magaalo xeebeedka Hobyo ka furmay wajigii labaad ee shirweynaha Nabadda Hobyo, waxaana furitaanka kasoo qeybgalay masuuliyiin iyo waxgarad kale oo ku abtirsada beelaha Habargidir. Hadaba halkaan ka daawo Muuqaalka Shirka.
10 Xaqiiqo oo ku Saabsan Shirka Nabadda Hobyo
August 5, 2019 admin1039
Shirweynaha Nabadda ee Beelaha Habargidir ayaa la filayaa inuu maanta oo Isniin ah 4/8/2019 ka furmo degmada Hobyo gobolka Mudug. Inta badan ergadii ka qeyb gali laheyd shirka ayaa ku sugan Hobyo, waxaana si wanaagsan u martigaliyey bulshada reer Hobyo. Hadaba halkaan waxaan idin kugu soo gudbinaynaa 10 Xaqiiqo oo ku Saabsan Shirka Nabadda Hobyo: […]
August 2, 2019 admin460
Allaha u naxariistee Marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Eng Yariisoow waxa uu ku dhashay degmadda Hodan ee gobolka Benaadir 16 kii August 1965kii.Waxbarashadiisa dugsi hoose,dhexe iyo sare waxa uu kaga baxay Banaadir Secondary School, isagoo sidoo kalena ka qalin jebiyey jaamacadda Gaheyr ,kuliyadda Civil Engineer sanadkii 1986kii. Shaqooyinkii uu soo qabtay Dawladda Hoose ee London intii u […]
July 23, 2019 July 23, 2019 admin458
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Maanta Xarunta Jaamacadda PSU Garoowe kaga qayb galay Bandhigga Buugaagta Garoowe oo sanadkii 5-aad la qabanaayo. Bandhid Carweedkaan ayaa waxaa uu socon doonaa mudo Saddex Cisho ah,waxaana howlka lagu qabanayo ku sugan marti kala duwan oo ka socota inta badan deegaannada Soomaalida. Madaxweyne Siciid Deni oo khudbad […]
Xil. Cabdiraxmaan Odowaa oo Abaalmarin la guddoonsiiyey (Daawo)
July 15, 2019 admin554
Madasha U Abaal-Gud ayaa abaalmarin guddoonsiiyey Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa, Madasha ayaa Xildhibaanka ka xulatay in ka badan 30 xildhibaan oo laga soo doorto Galmudug, waxaana uu kaalinta koowaad ka galay qiimeyn ay sameeyeen Madasha U Abaal-Gud. Halkaan ka daawo Munaasabadda lagu abaalmariyey Xildhibaan Odowaa.
Daawo: Shirka Nabadda Hobyo oo beri furmaya
July 14, 2019 admin928
Waxaa ku qulqulaya Magaalada Hobyo ee gobolka Mudug wufuud ka kala yimid meelo kala duwan, waxaana maanta halkaas gaaray siyaasiyiin iyo odoyaal dhaqan ka qeybgalaya shirkaas. Masuuliyiinta halkaas gaaray waxaa ka mid ah Madaxweynihii hore Ximan iyo Xeeb Maxamed Cabdullaahi Tiiceey iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Shaati cadde, iyo masuuliyiin kale. Sidoo kale Beri ayaa waxaa […]
July 13, 2019 admin687
Taariikh Nololeed: Tuma ayay ahayd Hodan Naaleeye? Rabbi naxariistii janno ha ka waraabiyo e, Hodan Naalleeye waxay ahayd gabadh waxtar badan oo hal-abuur aad u sarreeya leh. Waxa dadku inta badan ay si weyn ugu xasuustaan barnaamijkii caanka ahaa ee la magaca baxay Integration TV oo ah barnaamijkii ugu horreeyey ee luuqadda Ingiriisiga ku baxa […]
July 13, 2019 admin511
Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa muddo laba todobaad ka badan waxa uu ku sugan yahay gobolada Dhexe, isagoo booqday magaalooyin kala duwan. Rw Kheyre ayaa balanqaadyo taageero dhaqaale ka sameeyey Magaalooyinka Cadaado, Dhuusamareeb iyo laba dhinac ee Gaalkacyo. Kheyre oo 10 bishan booqday waqooyiga Gaalkacyo ayaa halkaas uga dhawaaqay inuu dhisayo garoonka ciyaaraha Cawaale, […]
Galmudug iyo Fursadaha Maanta Horyaal
June 27, 2019 admin465
Maamul gobaleedka galmudug oo ah maamul la yagleelay bartamihii sanadkii 2015tii, waxuu la kulmay caqabado, dhibaatooyin iyo khilaafaad ragaadiyey una diiday maamulkaas horumar iyo daganaansho siyaasadeed intaba, haddaba waxgaradka iyo masuuliinta reer Galmudug waxaa maanta horyaala fursado mudan inay ka faaideystaan suurtana galin kara inay maamulkaas u horseedan dib u heshiiseen iyo xasilooni siyaasadeed, waxaana […]
Itoobiya waxey u burburi doontaa sidii wadankii la’oran jirey Yogoslavia. Sababtuna waxey tahay waxaa ku nool qowmiyado isdiidan oo aan ku heshiin karin in ay qaybsadaan awooda dalka. Itoobiya weligeed xoog baa lagu xukumi jirey marnaba ma yeelan dowlad demoqraadi ah oo shacabku soo doortaan, dhaqankaas dowladnimo lagama yaqaan. Mida kale Itoobiya weligeed waxaa ka […]